Haamaha lagu keydiya Oxygen-ta oo Puntland diyaarinaysa - Awdinle Online
Haamaha lagu keydiya Oxygen-ta oo Puntland diyaarinaysa
Mamulka Puntland ayaa shaacisay in ay bilowday qorshe lagu diyaarinayo Haamaha keydiya Oxygen-ta si loo helo Oxygen ku filan Puntland oo dhan oo lagula tacaalo xanuunka COVID-19.
Qoraal ka soo baxay guddiga Puntland u qaabilsan ka hortagga iyo wacyi-gelinta cudurka Coronavirus ayaa lagu sheegay in guddigu uu ku hawllan yahay diyaarinta Haamaha keydiya Oxygen-ta si loogu adeegsado la tacaalidda xanuunka.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddigu ay shalay Gaalkacyo kulan kula yeesheen shirkadda samaysa Oxygen-ta magaalada islamarkaana ay kala hadleen muhiimadda ay leedahay in la diyaariyo Haamo Oxygen oo ku filan Puntland oo dhan.
Cudurka Coronavirus ayaa kamid ah xanuunnada loo yaqaan respiratory diseases oo waxyeelleeya Hab-dhiska Neefsiga waxaana dadka uu haleelo lagula tacaalaa mashiinka Respirator ( ventilator) si uu Oxygen kaafiya u helo.
Previous articleMadaxweyne Lafta gareen oo Cafis u fidiyay Maxaabiis
Next articleXasan Sheekh Maxamud “ Farmaajo waxaa uu mar walba Umadda Soomaaliyeed u muujiyaa kali-talisnimo”